Wikinomics: Otu Nkwekọrịta Aka Ga-Agbanwe Azụmaahịa | Martech Zone
Monday, March 12, 2007 Monday, March 12, 2007 Douglas Karr
Mgbe m nyechara nkatọ banyere akwụkwọ a, echere m na ọ bụ naanị ihe ziri ezi itinye mkparịta ụka a na Don Tapscott, onye edemede nke Wikinomics.
Ọzọkwa - M hụrụ isiokwu ahụ n'anya. Ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu ma ekwere m na ihe niile Don kwuru ziri ezi. Akwụkwọ ahụ gwụrụ m ike.
Don's azụmahịa: Ọdịdị ọhụrụ
Wikinomics: Nye aka dee isi nke ikpeazu.
Ngwa akụrụngwa kachasị mma iji kpochapụ atụmatụ ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ gị